I-China Allen Bradley PowerFlex Shayela Allen Bradley - Abahlinzeki - HuiTong Industry Company Limited google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Rockwell automation > I-Allen Bradley PowerFlex Drayivu
Sinikeza ukukhethwa okubanzi kwe-Rockwell automationI-Allen Bradley PowerFlex Drayivu, ifaka phakathiI-PowerFlex AC ne-DC frequency drive drive kanye ne-servo drive.
Ama-Allen Bradley VFD angakwazi ukuphatha ukusebenza kwamandla aphansi naphakathi futhi eze ngezilinganiso zamandla ezahlukahlukene.
Ukushayela kwe-Allen Bradley PowerFlex AC kanye ne-Powerfles DC drive kunikeza izindlela eziningi zokulawula, izici, izinketho nokufakwa, kanye nomthamo wamandla omhlaba kanye nezilinganiso eziningi zamandla.
Ngesakhiwo esingaguquki sohlelo kanye ne-interface ejwayelekile yomsebenzisi, i-PowerFlex idonsa lula ukwenza uhlelo nokuhlelwa futhi inciphise isikhathi sokusetha, ukuqeqeshwa, kanye nokusebenza.
Ukushayela kwe-PowerFlex Compact AC kuhlinzeka ngezindleko ezingabizi, ezisendaweni yonke yezinhlelo zokulawula imishini ezisebenza zodwa kanye nokuhlanganiswa okulula kohlelo.
I-Allen Bradley PowerFlex Drayivu ihlinzeka ngezixazululo zikagesi ezishintshayo ezinhlobonhlobo zezicelo zomhlaba. Yenzelwe ukuthi kube lula ukuyisebenzisa, inenzuzo yokonga isikhathi, futhi nephakethe elihlanganisiwe elikhulisa isikhala sephaneli nokuguquguquka kwezicelo.
I-Allen Bradley PowerFlex Drive compact Drives idonsa futhi inikeze isisombululo sezicelo zokulawula imishini esezingeni lomshini noma ukuhlanganiswa kwesistimu elula.
Sine-stock enkulu ye-Allen Bradley PowerFlex Drives efana ne-25A, 25B, 22A, 22B, 20A, 20B, 20D, 20F, 20G nolunye uchungechunge. Ungakwazibuza ngqo ama-Drives, noma usithumele i-imeyili enezinombolo zezingxenye. Sizokuphendula ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka!
â € ‹Isimo:I-Brand New, ifektri evaliwe
Incazeloï¼šI-PowerFlex 4- 0.4 kW (0.5 HP) AC Drayivu
Incazeloï¼šI-PowerFlex 4- 1.5 kW (2 HP) AC Drayivu
Incazeloï¼šI-PowerFlex 4 2.2 kW (3 Hp) AC Drayivu
Incazeloï¼šI-PowerFlex 4 3.7 kW (5 Hp) i-AC Drayivu
Incazeloï¼šI-PowerFlex 40- 4 kW (5 HP) AC Drayivu
Isimo:I-Brand New, ifektri evaliwe
I-Allen Bradley PowerFlex Drayivu I-Allen Bradley ethengisa, yokusungula enkulu esitokisini, inikezwa yiHiTong Industry Co; I-Ltd.Ungabe ufuna amanani aphansi amanani we-automation I-Allen Bradley PowerFlex Drayivu brandation nge-quotation? Singakunikeza ama-PLCs, ama-Powerflex Drives, ama-VFD, abalawuli beServo, Panelviews.